Abaar mise Qorsha Xumaan WQ- Khadar Abdi Dawlad. | Haqabtire News
Abaar mise Qorsha Xumaan WQ- Khadar Abdi Dawlad.
Umad kastaa waxay leedahay qorshe iyo jaangoyn, ay ku waajahdo masiibo kasta oo soo waajahda, oo ay ka mid yiin dhul gariir, roobab dabaylo wata, duufano iyo fatahaado. Waxay leeyihiin dad khibrad iyo aqoon u leh maaraynta Aafada(Disaster management) kuwaas oo si cilmiyeysan u darsa deeto soo saara hab lagu waajihi karo. Waxay dajiyaan qorshayaal, waxay soo saaraan warbixino hurumar leh (progress reports) oo ay ku qeexayaan xadiga ay leekaan doondto. Hadii aynu dib ugu laabano, Qisooyinka quraanka lagu tilmaamay, ama aynu soo qaadano, qisadii Nabi Yussuf markii boqorku ku riyooday todoba sac oo shilis oo cunaya todoba sac oo wayd ah, wuxuu nabi Yussuf ku sifeeyay oo uu qaybiyay todoba todoba.
قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فدروه فى سنبله الا قليلا مما تاكلون (٤٧) Waxuuna yidhi: waxaad tabcaysaan ood beeran doontaan todoba sano oo is raacsan, ee waxaad goosataan ku daaya sabuulkiisa wax yar oo aad cunaysaan mooyee.
ثم ياتى من بعد دءلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون (٤٨) Markaas waxa iman doonta arintaa ka dib todoba daran (Abaar) oo aad cuni doontaan waxaad hor marsateen wax yar ood kaydsateen mooyee.
Qisadani waxa ay ina tusinaysaa, in ay umadu yeelato qorshe ay kagaga hortagi karto waxa soo socda, iyada oo isticmaalaysa maskax iyo cilmi lana kaashanaysa dadka aqoonta khibrada iyo waayo-aragnimada u leh aafooyinka. Hadaba inagu ka umad ahaan ma leenahay, jaan-goyn aynu kaga hortagno, ku waajahno iyo mid aynu wax kaga qabano abaarahan soo noq noda?
Maxay se qabataa hay’adan ka hortaga aafada iyo masiibooyin ee marka la soo gaabiyo magaceeda la yidhaa NERAD?
Gudiga abaarahu shaqadoodu ma waxa weeyi oo qudha markay abaaro dhacaan lacagta umada ay ka ururiyaan? Sanadkii hore ee tagay waxa abaar baahsani ay ku habsatay gobolada galbeedka, tiiyoo sababtay dhimasho dad iyo xoolaba, taaakulayn gudo iyo dibadba may yarayn oo dadkeenu way u gurmadeen. Raxmaadkii eebana waa inoo da’ay.
miyaynu ka fikirnay sidee bayna dib inoogu soo noqon doonin abaartu? Sanadkii tagay dhamaadkiisii iyo kan bilawgiisana waxa gobolada bari ka jira, abaar ka xun tii kal hore. dawlad, shacbi, ganacsato, dal iyo dibadba waa laga wada qayb qaatay gurmadka, dadkaa leeday. Mar kasta oo ay abaari timaadana waxa inagaga baxda lacag malaayiin dolar ah. Hadaba damiirkeenu miyaanu marna ina siinayn, lacagtan aynu ku bixino aynu ku badalno, qorshe lagu abuurayo mashaariic dhaamam biyood iyo biyo xidheeno lagu baxsado markay dhibaatadani dhacdo. Miyaynaan yeelan karin qorshe ka hortag?
Dawlad iyo shiciba hadii aynu isku tagno, waxaan qabaa inaynu keeni karno qorshe inagoo isticmaalaynaa kharashka marka ay abaartu timaado ku bixino, intaynu mar kaliya isku gayno ku badalo fikrad dhaanta ta aynu hada ku dhaqano.
WQ/ khadar mohamed Abdi 08/01/2017